Reer London way diideen COVID oo waxay fasaxeen dibadda in ka badan kuwa kale ee Ingiriiska ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Reer London way diideen COVID oo waxay fasaxeen dibadda in ka badan kuwa kale ee Ingiriiska ah
Reer London waxay u badan tahay inay iska fogeeyaan welwelka oo ay iska indhatiraan talooyinka ku saabsan safarka inta lagu jiro aafada.
Dadka reer London waxay caddeeyeen inay ka yar yihiin dadka ka yimid meel kasta oo UK ka mid ah inay ka tanaasulaan fasaxooda sannadlaha ah ee dibedda inta lagu jiro aafo - xitaa haddii taasi la macno tahay inay ka soo horjeedaan talada Dowladda, bixinta kharashka baaritaanka safarka ee Covid iyo khamaarka nidaamka iftiinka taraafigga - sida laga soo xigtay. si cilmi baaris loo sii daayo maanta (Isniin 1 November) WTM London.
Afar ka mid ah 10kii (41%) ee reer London ayaa qaatay fasax dibadda ah sannadkii la soo dhaafay, laba jeer celceliska qaranka ee 21%, iyo in ka badan saddex jeer in ka badan dadka ku nool Waqooyi Bari, gobolka UK ee arkay tirada ugu yar ee fasaxyada dibadda la qaatay 12-kii bilood ee la soo dhaafay.
Kaliya 13% dadka ku nool Waqooyi Bari ayaa qaatay fasax dibadeed intii lagu jiray muddadaas, ayaa daaha ka qaaday Warbixinta Warshadaha ee WTM, taas oo codsatay 1,000 macaamiisha UK.
Laba jeer in ka badan inta reer London ee celceliska qaranku waxay ballansadeen fasax dibadeed iyo joogitaan, iyadoo 9% dadka caasimadda ku nool ay labaduba sii ballansan yihiin, marka la barbar dhigo celceliska qaranka ee 4%.
Kaliya 36% dadka reer London ayaan fasax ku bixin sannadkii hore - ha ahaato joogitaan ama safar dibadda - marka la barbar dhigo 51% celceliska qaranka.
Waxay umuuqataa in dadka reer London ee adkeysi lahaa aan laga joojin tijaabooyinka 'Covid', isbadalada iftiinka taraafikada iyo xitaa codsiyo ka yimid Dowladda iyo khubarada ku celceliyay inay Ingiriiska kula taliyeen inaysan u safrin dibadda - xitaa markii xayiraadaha safarka la fududeeyay oo ay sharci ahayd fasaxa dibadda.
Ka bixitaan la'aanta gobolka ee garoommada ka baxsan caasimadda waxay sidoo kale noqon kartaa arrin sabab u ah in aad u badan oo reer London ah marka loo eego celceliska qaranka ee fasaxa dibadda 12 bilood ee la soo dhaafay.
Intaa waxaa dheer, qufullada maxalliga ah ayaa dadka qaar ka dhigaya inay u safraan garoomada diyaaradaha ee gobollada ku jira, ama awood u lahaa in la geliyo, heer kale.
Agaasimaha Bandhigga WTM ee London Simon Press ayaa yiri: “Cilmi-baaristeenna waxay muujineysaa in dadka reer London ay aad ugu dhowdahay inay iska fogeeyaan welwelka oo ay iska indhatiraan talooyinka ku saabsan safarka inta lagu jiro aafada.
"Bixitaanka gobolka oo yar iyo xiritaanno badan oo gobolka ah ayaa sidoo kale la macno ah in dadka ka baxsan London aysan awoodin ama ay diyaar u yihiin inay duulaan.
“Xitaa markii safarka la fasaxay, waxaa jiray cadaadis badan oo kaga imaanayay Wasiirada Xukuumadda iyo la taliyayaasha caafimaadka inaysan safrin.
"Taas, oo ay weheliso jahawareerka iyo qiimaha tijaabooyinka Covid iyo isbeddelka joogtada ah ee xeerarka iftiinka taraafigga, ayaa dad badan ka dhigay safarka, laakiin waxay u muuqataa in dadka reer London ay aad uga go'aansadeen inta badan si ay u helaan fasaxooda caadiga ah ee dibedda - iyadoon loo eegin wax dheeraad ah kharash ama dhibaato."